Khetha izwe / isifunda sangakini
Inkokhelo namanani entengo Dropshipping Xhumana Nathi 24/7
Inkokhelo namanani entengo Dropshipping ngemvume Up ngemvume In Xhumana Nathi 24/7
Funda ukuthi kungani Hipkart kuwukukhetha ngawe
Bewazi yini ukuthi siletha traffic 300% ngaphezulu kunamanye ezisekelweni?
-Checkout ngokuxhumanisa esitolo noma ukubhalisela i esitolo phakade khulula.
Qala i-Mahhala Shopify
ku Facebookku Instagramku Amazonku Hipkartku ChumbakApp
u bafuna. Yakha ibhizinisi lakho
Alikho ikhadi lesikweletu okudingekayo.
Zonke usizo futhi amathuluzi owadingayo Yokuphumelela inthanethi.
Mahhala Lokuvikeleka Kwe-SSL
amangalisayo Indikimba yendaba
Vikela • Fast • Ukuguqula
Hlola yethu Online Store Builder ngaphansi plan khulula inqobo uma uthanda.
Ayikho inkontileka edingekayo
izivumelwano yanyanga zonke enza kube lula. khulula okuqhubekayo noma Khansela kanye ushintshele ku-DRM.
Ayikho ukulahlekelwa umzamo
izinhlelo Mahhala ukugcina umzamo wakho ku isakhiwo esitolo lokuphila phakade.
Ayikho ubuchwepheshe ezidingekayo
Simple ukuchofoza interface.Few futhi izifanekiso khulula uthole wena konke okudingekayo.
Hlangana abenzi abenza ekubumbeni hun emhlabeni
Nokudayisa • Electronics • Enye
Qala sewebhu yakho ukuze Mahhala
Nokudayisa • Fashion • Abesifazane
Thola inthanethi ngaphansi kwehora.
Awudingi ukwazi ukuthi khomba noma umklamo wokwakha an amazing esitolo online. Nge esitolo sethu Builder, esikwenzile zonke izinto lobuchwepheshe ngawe. Vele usitshele umkhakha wakho noma umqondo futhi uwena maphakathi khona (sina).
Qala i-Mahhala Kungani Hipkart Kuyamangaza ngakho !!
Yakhela empumelelweni yakho.
Ngezinye Hipkart senze iyatholakala amathuluzi hhayi nje ukuthengisa kodwa ukwakha umlilo ethengisa ngaphezulu. Amakhasimende kukhona izikhathi eziyisishiyagalolunye KUNGENZEKA ngaphezulu ukukhetha ibhizinisi nge look uphawu futhi sigcine nge uhlelo lokusebenza lweselula siqu.
Qala i-Mahhala Imeyili Kungani Sebenzisa domain ezisekelwe
Thuthela ukuguqulwa kangcono.
Usuvele unayo i esitolo inthanethi? Inike emakethe ewufanele. Nge odonsa phambili engcono ukuguqulela imiklamo isingathwe kumaseva aphephile, ibhizinisi lakho ku-intanethi Ayikwazanga ucele kakhudlwana futhi konke mahhala.
Qala i-Mahhala Kuyini Web Hosting
Control Ubude ku Imali.
Ukukhetha noma Inkokhelo Indlela & abahlinzeki Multiple, xhuma uphinde uthole imali ngqo. Sikholelwa akekho Kufanele isandla kahle hun ku-wallet yakho. ikhasimende lakho lokukhokha service wakho wesevisi okhokhela ngqo bese umhlinzeki yokukhokha okhokhela kuwe ngqo.
Qala i-Mahhala Kuyini Smart Line
Seo & Oku-Translation
Hipkart iyingxenyekazi kuphela emhlabeni okukuvumela ukwakha esitolo sakho ngolimi lwakho kodwa amakhasimende ukusibona ngolimi lwabo futhi lwemali. Thina pre-ukuhumusha esitolo sakho ngezilimi eziningi ngoba yokuthengisa kangcono futhi seo
Trust eyakhelwe ngaphakathi
Bakwethembe - A Wildcard SSL Certificate kubonisa izwe indawo yakho iphephile futhi ahlangabezana wena ephezulu ku-Google.
Sewebhu yami ikusiza verbeteren search engine lwakho simo ukuze abantu abaningi ngeke bakuthole. Funda kabanzi mayelana SEO nge okokufundisa ukuze ukwazi nokwandisa nakakhulu izinjini efana ne-Google, i-Bing, futhi Yahoo!
Yenza isipele & ukubuyisela
Hlela kusitolo sewebhu yakho bengabheki-ungahlala uhlehlise izinguquko. isipele okunengi noma izinguqulo ehlukile esitolo sakho sewebhu kungenziwa yomlando ngawe ukushintsha phakathi izinguqulo, njenge ukukhuthaza imikhankaso isikhathi-sensitive.
e-commerce yethu esitolo vs. elayo
Intengo yohlu *
Hipkart kuyinto Mahhala Vs Shopify $ 29 / ngenyangaVala
$29 /ngenyanga *
Ngokungafani Shopify at Hipkart aphathe ibhizinisi lakho ku-intanethi mahhala ngaphandle ezingu-14 Trial mkhawulo.Vala
Isitolo sakho kanye nemikhiqizo pre-ehunyushiwe kangcono seo wezilimi eziningi emhlabeni wonke.Vala
Ngokungafani Shopify esitolo sakho aziqabukeli njengoba ukutholakala inbuilt kukuvumela imikhiqizo yakho ukuba ngesikhathi kuthunyelwa.Vala
Hipkart is Free Vs Wix $29/monthVala
Unlike Wix, Hipkart is Free to attach your Custom Domain with your online store.Vala
Unlike Wix your store is not isolated as inbuilt discovery lets your products to be discovered.Vala
Hipkart is Free Vs BigCommerce $29.95/monthVala
$29 .95 /ngenyanga *
Unlike BigCommerce at Hipkart run your online business for free without 15 days Trial limit.Vala
Unlike BigCommerce your store is not isolated as inbuilt discovery lets your products to be discovered.Vala
Hipkart provides you free hosting, you never need to pay anything for hosting.Vala
$19 /ngenyanga *
Hipkart is packed with powerful tools so you never need to spend anything on development. Hipkart provides you Free SSL certificate to secure your store.Vala
Unlike WooCommerce your store is not isolated as inbuilt discovery lets your products to be discovered.Vala
Ecwid sets small limit on products where Hipkart allows you upload many more products for Free.Vala
$15 /ngenyanga *
Hipkart is free to upload products and add your own domain and a free SSL certificate.Vala
Unlike ECWID your store is not isolated as inbuilt discovery lets your products to be discovered.Vala
** Iphakheji ngokungenamibandela khulula uhlala khulula ngenxa yokuphila inkontileka.
Awukabi nesiqiniseko sokuthi lokho ukuthengisa?
ngisho noma ungeyena
Awukabi nesiqiniseko sokuthi lokho ukuthengisa? Sivumele sikusize.
Siyajabula ukusiza, ngisho noma ungekho umdayisi okwamanje.
Silapha 24/7/365. Ukusekela kunini.
Asakhe ibhizinisi lakho
91,000 + amabhizinisi ngonyaka odlule nje kuphela,
Isethaphu hun bhizinisi ku global platform yethu e-commerce ukuthola hun ibhizinisi online.
Unikeza behlomula kakhulu khulula ngakho kungani abantu namanje ukukhokhwa Shopify?
Yebo sidedela behlomula kakhulu khulula yingakho abantu abafinyelela ekwazini ngathi ukhethe nathi, isibonelo Lihle abantu abaningi abawuqedayo hun izinsuku 14 kwecala ku Shopify ekugcineni buya us noma eziningi nezinye ubani ngemuva kwezinyanga 2-3 ku Shopify hambisa us. Kungenzeka uma ungenawo namuhla ukuvula esitolo sakho sizobe ukukubona masinyane ku Hipkart.
Engiyikho Shopify engingayenza ukuvula esinye isitolo Hipkart?
Yebo sibe nabantu abaningi abavula hun esitolo wesibili Hipkart futhi iningi abafeza ngokuphelele Shopify ubuka izinzuzo ezinkulu kanye kulondolozwa ze uthole Hipkart eqhathaniswa ezibizayo futhi ikhokhelwe Shopify.
Ngingayithola kanjani wathutha esitolo yami kusukela Shopify?
Vele ukubhalisa esitolo sakho samahhala, Lapho sithi khulula yayo mahhala ekuphileni akuyona izinsuku 14 kwecala ngaphandle inketho ukudayisa. Bese usebenzisa yokungenisa amathuluzi ukungenisa imikhiqizo yakho, yayo ukuthi elula.
Uma Hipkart imahhala, khona-ke kumelwe abe nokulawula, izinkokhelo noma yokuthengisa yami, kulungile?
:) Cha! Abantu abaningi babe imibono enganembile ukuthi. Yilokho eminingana zamanga Hipkart kuyinto esobala, sikholelwa ‘Isitolo Yakho Imikhiqizo yakho, Sales yakho, inzuzo yakho’. Iqiniso liwukuthi umthengi ekukhokheni isango yakho okhokhela ngqo asinawo control noma ukufinyelela. Kukhona izinqumo eziningi PayPal, PayKloud, 2Checkout, Umugqa, Authorize.net, InstaMojo futhi abaningi
Ngingaba nayo uqobo igama lami lesizinda esitolo yami yini umvuzo salokho?
Yebo offcourse ungaba YILUPHI igama lesizinda ukuthi zibhaliswe ne wesizinda sakho bese ukhomba ukuba HipKloud DNS mahhala Ngaphandle Noma yiziphi izindleko. Uma ungenayo ungabhalisa nge GoDaddy, Namecheap noma yimuphi omunye umbhalisi bese ukhomba ukuba esitolo sakho ku Hipkart.
Kungakanani esitolo ithempulethi yetimu izindleko ku Hipkart?
Izihloko amahhala futhi ungadala amahle indaba ephathwayo for esitolo sakho cleavable by Ukukhetha isifanekiso bese uhlela nezidingo zakho usebenzisa ngokuchofoza yethu super lula futhi ugcine umhleli isifanekiso. Futhi uma une into ethize kakhulu ukuthi ungathola buza nje Ukusekela ze kuzokusiza.
Bangaki imikhiqizo engingayenza wengeze?
Njengoba kushiwo ukuqhathanisa yethu ishadi e zamanani kwesigaba, azikho umkhawulo ungakwazi ukwengeza angenamkhawulo noma imikhiqizo yakho noma imikhiqizo dropshipping ukuba ezitolo Hipkart.
Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe ukumaketha esitolo yami nemikhiqizo Hipkart?
Hipkart kuyinto ukutholakala inethiwekhi kuyasiza ukuthola imikhiqizo yakho uma kuthunyelwa wordwide nge inethiwekhi yayo izigodi inthanethi Okuyınqo, Kodwa ukuze kickstart yokuthengisa zakho ezibaluleke yayo wena ngemakethe esitolo sakho uthanda nje OKUNYE inkundla esinayo inbuilt AI enophephela yithuluzi at khulula-ngoba izindleko . Ukukusiza ukumaketha Facebook nokuningi.
Umngane omuhle Ngitshelwe kimi ukuthi Hipkart uyakusiza e abampofu e-Afrika & Asia ngokunikeza okungeziwe ukubasiza ukwakha hun engenayo ukusakaza, mina ezithintiwe yilo ngingakufakazela kanjani Inomthelela isinyathelo esikhulu lesi HipKart sika?
Simane Toilets emhlabeni khulula e-commerce ecosystem akuyona NGO ngakho Cant ukwamukela YILUPHI Iminikelo yezimali eyenziwa ngokuzithandela kodwa siyabonga imicabango yakho mihle kangakanani futhi lunomusa. Uma ufuna ngempela ukusiza isisize, usisize ngokuchofoza isixhumanisi esingezansi ukuze wabelane nathi obathandayo nabangane.
Qala uhambo lwakho empumelelweni ne Hipkart
Yakha Isitolo lakho Mahhala
Dala i esitolo online for free, Khohlwa ezingu-14 Izilingo - Sikhululekile kube phakade.
Nokuhlonza kulula futhi kumahhala manje. Thola, ohlwini, Thengisa cleavable zinezincazelo zokugcwaliseka ezenzakalelayo.
Market Kalula & Yalutho
Mahhala yethu AI ithuluzi londoloza imali nesikhathi nokwakha kakhulu elungiselelwe Izikhangiso kuka mathupha.​
Hlola ithuluzi lokumaketha
Hambisa Londoloza Khulisa
Ukhathele Expensive ‘14 Izinsuku Inqola’ kwabanye? Ake Certified yethu Isazi ukukusiza uthuthe esitolo lakho ikhokhwe platform yethu khulula.
Hlola kufuduka yakho
Zama Hipkart mahhala, uphinde uhlole wonke amathuluzi kanye nezinsizakalo udinga ukuqala, ukusebenzisa, futhi ukhulise ibhizinisi lakho.
Hipkart ikuvumela cleavable ukuthengisa inthanethi emhlabeni wonke kusukela ezokuhweba ngekhompuyutha yakho esitolo - Simple & Mahhala.Hipkart sika Ukutholwa Network kusiza imikhiqizo yakho ukuze uthole ukuthumela amakhasimende akho emhlabeni wonke.
IZIDINGO & PAY
KARTSUPPLY (THOLA A Supplier)